Semalt Expert avy any Islamabad - Inona no atao hoe mpandefa mozika ary ahoana no mety ho vokany eo amin'ny SEO?
Maro ireo webmasters no miahiahy momba ireo teny sy andian-teny ao amin'ny tranonkala rehefa mihevitra izy ireo fa ny rindranasa fikarohana dia manisa ireo teny fototra rehetra mba hanombanana ny maha-zava-dehibe ny tranokala ary na dia ny isany aza. Soa ihany, ny SEO maoderina dia mitaky zavatra maro ary tsy ny momba ny teny fanalahidy rehetra. Raha ny marina, misy an-jatony an-jatony fanodinana fitaovana fitadiavana fikarohana izay mitondra anjara biriky ao amin'ny tranonkalan'ny fikarohana. Ny zava-drehetra avy amin'ny famaham-baovaon-doha ho an'ny famaritana meta sy ny rohy miditra dia tena ilaina amin'ny fisian'ny milina fikarohana tsaratsara kokoa. Nandritra ny taona maro, Google, Bing, ary Yahoo dia nianatra ny fomba hamaritana raha misy tranonkala iray mahaliana na tsia ary ny fomba hitsarana ny kalitaon'ny votoatiny.
Nilaza i Michael Brown, mpitantana ny Success Success of Semalt , fa mila manao ny endriky ny tranonkala rehetra ny Google sy Bing rehetra, ary mamaritra hoe iza amin'ireo tranonkala no manana ny lanjany tsara ary omena alalana hampiseho azy valin'ny fikarohana.
Raha mbola fantatr'ireo mpikarakara rehetra ny tranonkala, dia tsy miorina ny lisitry ny milina fikarohana. Ny vintana dia ny hanampy anao hampiova sy hanovana farafaharatsiny sy votoaty tsara lavitra noho ny anao ireo mpifaninana aminao, ary ny asan'ny spider Google dia tsy ho vita. Izany no antony tokony hanavaozanao tsy tapaka ny votoatinao ary hizara lohahevitra maromaro. Izany dia hanondro ireo fitaovana fitadiavana fa ny tranonkala dia mavitrika sy salama..
Aza avela ny fahatezeran'ireo mpitsikilo sy ny botsika Google
Nisy fotoana izay mety mora tratran'ny fitadiavana. Ny mpikirakira web sy webmasters dia nampiasa tetikady mainty SEO hanodinana ny laharam-pizaran'ireo tranonkala amin'ny valin'ny fikarohana biolojika. Ny fitenenan-dalan'ny tenimiafony no tetikady malaza sy tena ampiasaina, fa ankehitriny ny milina fikarohana dia lasa tsara amin'ny famantarana ny fihetsika toy izany. Rehefa milaza ny tsy fahombiazan'ny fifanenjehana ny mpitsikilo dia mety miteraka fandrarana maharitra izany na sazy mihantona. Ny famaizana dia famelezana ny tananao, ary tsy hamela anao hanatsara ny fisian'ny tranonkala. Vokatr'izany dia hihena ny fifamoivoizan'ny tranonkalanao satria tsy hifantina tsara ny milina fitadiavana.
Marina fa mpanjaka ny votoatiny, ary raha hitan'ny mpitsidika an'i Google ianao dia nahasarika tranonkala iray mahafinaritra sy manan-karena, izay afaka miaina mifanaraka amin'izay andrasan'ny mpitsidika ary mifantoka amin'ny fomba fanao tsara indrindra SEO, Ny fanamarihan'ny tranonkala dia hanatsara tanteraka. Tsy tokony hampidi-doza ny lalao miaraka amin'ny teknika manipulation ianao mba hanintonana mpitsidika bebe kokoa satria tsy hahavery anao ny vokatra irinao.
Fomba iray hafa hahatratrarana ny fahombiazana ary hahatratra ny tampony
Mendrika an'arivony dolara ny Google sy ny fitaovam-pitadiavana hafa, ary ireo tranonkala ireo dia tsy nahatratra ny halehiben'ny fahombiazana tamin'ny fanomezana fanampiana. Ity milina fikarohana ity dia tafiditra amin'ny fivarotana sehatra habaka mihoatra ny valin'ny fikarohana, ary ireo mpanjifan-tsolika sy marika dia manolotra teny fikarohana toy ny saka sy alika. Rehefa misy olona miditra ao amin'ny fikarohana dia hipoitra ny dokam-barotra pop-up na banner. Izany dia fomba tsara handalinana ireo mpitsikilo, bots, ary ireo mpandoa hetra dokam-barotra izay mandoa hetra ho an'ny sehatra afa-tsy rehefa manindry ny dokambarotr'izy ireo ny dokam-barotra.
Tsy misy antoka fa hahatratra ny laharana ambony ny tranonkalanao satria misy tranok'asa an-jatony an'arivony ao amin'ny toerana ambony. Ny fomba tsara indrindra hanombohana dia ny mahatakatra ny zavatra ataon'ny tsirairay. Amin'izany dia afaka manatsara ny votoaty ianao ary afaka manatsara ny valin'ny motera amin'ny tranokalanao Source .